Mmemme Iri Ji Ọhụụ Dịka Omenala Igbo...
Iri ji ọhụụ abụghịzị okwu ọhụụ na ntị nwa ọbụla gbara ahọ n'ala Igbo. Ka ọ dị taa, ọtụtụ ndị na-enye ya nkwọwa dị iche-iche ma na-ahụtakwa ya dịka nke ma ọ bụ nke ọzọ.
A Kpọkuola Ndị Aka Ji Akụ Ka Ha Na-Echeta Ndị Ụwa Na-Atụ n'Ọnụ...
Nwọrah Etoola Ka Ọ Dị Taa n'Ọgbụgbà Ahọ Abụọ Ya...
Igbo sị na ọ na-abụ e tòó onye gburu ewu, ọ hụ ehi o gbuo; maka e were ọjà tòó dike na mgba o nwùdèrè, o were ọkpa kwàá aja.
ASC Ekwela Ndị Anambra Nkwà Ezi Nchekwa Maka Nzukọ Ọnwa Ọgọstụ...
Òtu ahụ jikọtara ndị ọrụ nchekwa dị iche-iche na steeti Anambra, bụ nke a maara dịka 'Anambra State Security Council' adụọla ụmụafọ steeti ahụ ka ha ghara ịtụ egwù n'ịbata ụlọ maka nzukọ ọnwa Ọgọstụ ahọ a, n'ihi na egwu ọbụla adịghị.
ASCSDA Ekwe Nkwà Ikesàkwùrù Ọtụtụ Ime Obodo Ego Ọrụ n'Izuụka Ọzọ...
Ndị Uwe Ojii Anambra Anwụchiela Ndị Na-Apụnara Mmadụ Ụgbọala...
Obianọ Eduola Ọnwụamaegbu n'Iyi Ọrụ Dịka Ọka Ikpe Ukwu Steeti Anambra...
Igbo sị na ọ na-abụ onye e nyèrè mara chịkwaa, e nyekwuo ya nke ka nkè. Ka ọ dị taa, aka na-achị steeti Anambra, bụ gọvanọ Willie Obianọ eduola oriakụ Ijem Ọnwụamaegbu n'ọrụ dịka ọkaikpe mkwụmọtọ steeti ahụ, na dịka nwaanyị mbụ na-eji ya bụ ọkwa. Oke mmemme idu n'iyi ọrụ ahụ bụ nke weere ọnọdụ n'obi gọọmenti dị n'Awka, bụ isi obodo steeti ahụ, oge ndị isi ọchịchị steeti ahụ nwere nzukọ.
Obianọ Anabatala Nkwanye Ugwu Ahụ E Nyere Anambra n'Ịkwàkite MSMEs...
Aka na-achị steeti Anambra, bụ gọvanọ Willie Obianọ anabàtala nkwanye ùgwùṅahụ e nyèrè steeti Anambra na nso-nso a dịka steeti kacha akwàdo obere ụlọ ọrụ na azụmahịa ka na-eto eto n'ala Nigeria, a maara na bekee dịka 'Micro, Small and Medium Scale Enterprises', bụkwa nke e nyere site n'aka osote onyeisi ala, bụ maazị Yemi Osinbajọ n'aha gọọmenti etiti.
Ndị Uwe Ojii Anambra Ejidela Ndị Ohi Ọzọ Na Ndị Òtù Nzuzo...
Igbo sị na ọnụ anaghị ezu ike ma ọ bụrụ na ihe ọ na-ata agwụghị, maka na ọ na-abụ a na-etigbu ọ ka na-arịsịta, ị mara na ihe a na-etigbu agwụbèghị n'ebe o si arịpụta.
E Tòóla Gọọmenti Anambra Maka Ezi Ọrụ Ya n'Ịkwàlite Ahụike...
Igbo sị na ọ na-abụ e tòó onye gburu ewu, ọ hụ ehi, o gbuo. N'ịgbasò nke a, gọọmenti steeti Anambra nọrọ nso-nso a wee nweta òtùto site n'aka òtù ọrụ ahụike gọọmenti etiti a kpọrọ 'National Primary Health Care Development Agency' maka ezi ọrụ ya na ịgba dị iche-iche ọ na-eti na ngalaba ahụike steeti ahụ.
Ndekwuru Nde Mmadụ Na-Arịa Ịba Ọcha n'Anya Na Nigeria – Dọkịta Ọkpala...
Dịka ọ bụ ihe doro anya na ọrịa a mààrà aha ya bụ òzùrù ụwa ọnụ, e meela ka a mara na mmadụ karịrị nde iri abụọ nà-arịa ọrịa ịba ọcha n'anya n'ala Nigeria, bụ nke nwa bekee kpọrọ Hepatitis.
Omenala: Ndị Ogidi Na Ogbunike Emeela Emume Nwafọr...
Ịma mma nke ọnatarachi na njirimara ndị Igbo pụtarannọọ ìhè nso-nso a, dịka ndị obodo Ogidi dị n'okpuru ọchịchị Idemili North na Ogbunike dị n'okpuru ọchịchị Oyi na steeti Anambra merùbèrè emume Nwafọr, bụ otu n'ime oke mmemme dị iche-iche e jiri mara ha. Mmemme ahụ bụ nke ọ bụ naanị obodo abụọ a na-eme ya n'ala Igbo gbaa gbùrùgbúrù, ma bụrụkwa nke ha ji achịkọta ahọ ọrụ ugbo.